Homeसमाचारआज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
February 11, 2021 admin समाचार 4875
बिहीबार नेपाली बजा’रमा सुनको मुल्य तोलामा चार सय रुपैयाँले घटेको छ । हिजो प्रतितोला ९१ हजार ९ सय रुपैयाँमा का’रोबार भएको सुनको मुल्य आज तोलामा चार सय रुपैंयाले घटेर प्रतितोला ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार हुने सुनचाँदी महा’संघले जनाएको छ ।
तेजावी सुनको मुल्य बिहीबार ९१ ह’जार रहेको छ । यस्तै चाँदीको मुल्य पनि तोलामा २५ रुपैयाँले घटेर प्रति’तोला १ हजार ३१५ रुपैयाँमा कारोबार हुने महा’संघले जनाएको छ । हिजो चाँदीको मुल्य प्रतितोला १३ सय ४० रुपैयाँ रहेको थियो । – खबर हब बाट
यातायात व्यवस्था का’र्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) उत्तीर्ण गरेको डेढ वर्षभित्र राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सेवाग्राहीले प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेको एक वर्षभित्र राजश्व तिर्नुपर्ने व्य’वस्था भएकामा सेवा’ग्राहीलाई सहज हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रयो’गात्मक परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीले कोभिड–१९ का कारणले राजश्व तिर्न नपाएकाले अवधि अहि’लेका लागि बढाइएको वि’भागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
यातायात व्यव’स्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० मा संशोधन गरी सो व्यवस्था गरिएको हो । उनले भने, “धेरै सेवाग्राहीले कोभिडका कारणले राजश्व तिर्न नपाएको भनी गुनासो आए’काले अवधि बढाएको हो ।”
कोभिडका का’रण तोकिएको अवधिमा सेवाग्राहीले राजश्व बुझाउन नसकेकाले हालका लागि सो व्यवस्था गरिएको भए पनि पछिसम्म सोही व्यवस्थाले निरन्तरता नपाउन सक्ने निर्दे’शक पौडेलको भनाइ छ ।
चालक अनुम’तिपत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन र अनुमतिपत्र वितरण, नवीकरण प्रदेश सरकारअन्तर्गत यातायात कार्याल’यले गरिरहेका छन् । अनुमतिपत्रको सर्भरको काम र छ’पाइको काम विभागले गरिरहेको छ ।
विश्वव्यापी महा’मारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नेपालमा पनि देखिन थालेको थियो । नेपालमा दोस्रो सङ्क्र’मित भेटिएसँगै सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण देशभरका सबै सरकारी कार्यालयसँगै यातायात व्य’वस्था कार्यालय पनि बन्द भएका थिए ।
कोभिड–१९ बाट सु’रक्षित हुँदै असारदेखि कार्यालय खुले पनि नयाँ चालक अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध थियो । कार्या’लयले चालक अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरण जारी राखे पनि कार्यालयमा भीड हुने जनाउँदै नयाँ अनुमतिपत्र सेवा अ’वरुद्ध गरेको थियो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय र सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको वि’भागबीचको समन्वयमा नै गत पुसदेखि नयाँ अनुमतिपत्र खु’लाइएको थियो ।
राज्यवि’रुद्धको कसुरमा रामकुमारी झाँक्री प’क्राउ, बर्ष जेल हुन सक्ने
स्वेच्छिक आ’त्मह’त्याको लागि थ्री डी पड, जसमा १५ सेकेन्डमा हुन्छ मृत्युवरण!
December 11, 2021 admin समाचार 2500
अस्ट्रेलिया’को एउटा कम्पनीले थ्री डी प्रिन्टेड पड निर्माण गरेको छ, जसले मानिसहरुलाई कुनै पी’डा न’दि’इ मृत्युव’रण गर्न सहयोग पु-याउने विश्वास गरिएको छ। सो मेसिन चाँडै नै स्वीट्जरल्यान्डका वासिन्दा’ले प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। पडको नि’र्माण
भाइरल चेली लक्ष्मी खड्का र भाग्य न्यौपानेको पहिलो गित (हेर्नु’होला भिडियो)
March 23, 2021 admin समाचार 4191
भाग्य न्यौपाने अहिले यो व्य’क्तिगत नाम भन्दा पनि संस्था’गत नाम नै भैसकेको छ । उहालाई नचिन्ने नदेख्ने नबु’झ्ने सायदै कोहि होलान् ।एकदमै सह’नसिल,मिजासिला ,मेधावि स्वभावका अनि नयानया प्र’तिभा तपाईं हाम्रो समक्ष सबैभन्दा पहिले सा’र्वजनिक गर्ने
भागीरथीले पालेका बाख्रा हेर्दै भ’क्कानो छोड्दै रुन्छिन् आमा, भागीरथिका सबै सामान ह’टाए पनि आशु रो’किएन आमाको
February 21, 2021 admin समाचार 4779
शुक्रबार भागरथी भट्टको अन्तिम संस्कार गरेर घर फ’र्किनु भएका केशवलाई आमा स’माल्न गाह्रो भईरहेको छ । आमा द्रोपति छोरीले बारीमा लगाएको तोरी फूलेको देखेर छिन छिनमा भ’ क्कानिएर रुनुहुन्छ । भागरथीको याद आउने घरका सबै